Morning Glory ( 2010 ) | MM Movie Store
Morning Glory ( 2010 )
အမရေိကနျမှာ ရိုကျကူးထားတဲ့ သတငျးထောကျတှေ ၊ ထုတျလုပျသူတှရေဲ့ နစေ့ဉျဖွတျသနျးနရေတဲ့အခကျအခဲတှကေို ဒီကားလေးထဲမှာ မွငျတှရေ့မှာပါ …..ဘကျကီ ဖျောလာဆိုတဲ့ ထုတျလုပျသူတဈယောကျဟာ သတငျးတှကေိုအကွံပေးပွီး ရိုကျကူးရတဲ့သူပေါ့ ။
တဈနမှေ့ာ သူဟာကုမ်မဏီတဈခုကနေ အလုပျထုတျခံလိုကျရတယျ ။ ဒီလိုနဲ့ သတငျးကုမ်မဏီတှမှော အလုပျလိုကျလြှောကျရငျး အလုပျရခဲ့တယျ။သူလုပျရမဲ့ကုမ်မဏီက နာမညျသိပျမရှိတော့ အဲ့ကသတငျးတငျဆကျသူတှဟော အလိုမကဖြွဈလာရော ….
အဲ့နောကျပိုငျးမှာ သူမရဲ့အစှမျးအစတှနေဲ့ အောငျမွငျအောငျဘယျလိုလုပျခဲ့လဲ ၊သူလေးစားရတဲ့ ရကျချ ပျေါမရီ ဆိုတဲ့သတငျးထောကျကို သူဘကျပါအောငျ ဘယျလိုစညျးရုံးခဲ့ ပွီးတော့အခကျအခဲတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့လား … ဆိုတာတှကေိုတော့ဒီဇာတျလမျးလေးကွညျ့ရငျး လလေ့ာလိုကျရအောငျနျော ။
သတငျးထောကျလုပျခငျြသူတှေ ၊ ထုတျလုပျလုပျခငျြသူတှအေတှကျ ဒီကားလေးဟာ ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားကောငျးလေးပါ ။ဒီကားထဲမှာ ဟာသအနှောလေးတှနေဲ့ ဗဟုသုတတှအေမြားကွီးပါလို့ ကွညျ့စခေငျြပါတယျ ။
အမေရိကန်မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သတင်းထောက်တွေ ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ဒီကားလေးထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ …..ဘက်ကီ ဖော်လာဆိုတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဟာ သတင်းတွေကိုအကြံပေးပြီး ရိုက်ကူးရတဲ့သူပေါ့ ။
တစ်နေ့မှာ သူဟာကုမ္မဏီတစ်ခုကနေ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သတင်းကုမ္မဏီတွေမှာ အလုပ်လိုက်လျှောက်ရင်း အလုပ်ရခဲ့တယ်။သူလုပ်ရမဲ့ကုမ္မဏီက နာမည်သိပ်မရှိတော့ အဲ့ကသတင်းတင်ဆက်သူတွေဟာ အလိုမကျဖြစ်လာရော ….
အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့အစွမ်းအစတွေနဲ့ အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ ၊သူလေးစားရတဲ့ ရက်ခ် ပေါ်မရီ ဆိုတဲ့သတင်းထောက်ကို သူဘက်ပါအောင် ဘယ်လိုစည်းရုံးခဲ့ ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လား … ဆိုတာတွေကိုတော့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရင်း လေ့လာလိုက်ရအောင်နော် ။
သတင်းထောက်လုပ်ချင်သူတွေ ၊ ထုတ်လုပ်လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ဒီကားလေးဟာ ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးပါ ။ဒီကားထဲမှာ ဟာသအနှောလေးတွေနဲ့ ဗဟုသုတတွေအများကြီးပါလို့ ကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
Beauty Salon: Special Service (Link 3)